Bangladesh: Mankao Shahbagh Avokoa ny Lalana Rehetra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Febroary 2013 5:21 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, Français, Aymara, বাংলা
Ao Shahbagh, mandray andraikitra ny tanora ary nampitsahatra ny resaka politika tamin'ny andro fahaefatry ny hetsika. Mpanao fihetsiketsehana an'arivony no manohy mibodo ny arabe fiolanana midadasika indrindra ao andrenivohitr'i Bangladesh, ao Dhaka mba hitaky sazy farany izay henjana indrindra ho an'i Abdul Quader Mollah, lehiben'ny antoko Islamista sy ho an'ireo olon-kafa voampanga tamin'ny heloka an'ady nandritra ny tolom-panafahana 1971.
Niandry 42 taona izy ireo mba hitsarana ireo voampanga, maro amin'izany no mpanao politika miaraka amin'ny antoko Islamista Jamaat-e Islami, nilaza ireo mpanao fihetsiketsehana fa tsy hihemotra mandra-panasaziana ireo meloka.
Rehefa andro Zoma sady andro tsy iasana, vahoaka marobe no andrasana hamonjy ny fihetsiketsehana. Famoriam-bahoaka goavana tarihin'ireo tanora no hotontosaina ao Shahbagh amin'ny 3:00 hariva. Tambajotra Bilaogera sy Mpikatroka, Mpikatroka ara-kolontsaina sy Fikambanana tanora no hitarika ny famoriam-bahoaka goavana. Tsy azo atao ny teny filamatra/kabary politika. Niangaviana ireo fikambanana politika mba tsy hilanja sora-baventy ara-politika. Nanasa ireo mpianatra avy amin'ny sekoly sy ny kolejy ny mpikarakara mba ho tonga hamonjy ny hetsika.
Alefan'ireo tanora mpikatroka toa an'i Shourov Hassan, Mahmudul Amin ary i Fahim Mahmud mivantana ny fihetsiketsehana ao Shahbagh. Afa-manaraka ny fandefasana mivantana eto ianao.
Fandefasana mivantana ny hetsika amin'ny fampiasana finday. Sary avy amin'i Matir Manush
Matir Manush nanoratra tao amin'ny Facebook:
Izao no fijery nomerika, olona maherin'ny 2500 no miara-mijery ny fihetsiketsehana ao Shahbagh.
Ny tambajotra bilaogera sy mpikatroka no tompon-kevitra tamin'ity fihetsiketsehana sy fitroarana tamin'ny Talata 5 Febroary atoandro ity, taorian'ny fanambarana ny didim-pitsarana sy ny sazy an-tranomaizina mandrapaha-faty ho an'ilay lehiben'ny Jamaat-e-Islami, Abdul Quader Mollah. Indreto sombiny tamin'ny hetsika tao Shahbagh (nahazoana alalana avokoa ny sary rehetra):
Vahoaka marobe ao Shahbagh. Sary avy amin'i Aninda Kabir Avik
Hetsika hazavana tao Shahbagh. Sary avy amin'i Sharat Chowdhury
Teny filamatra eny amin'ny arabe mitaky ny sazy farany henjana indrindra. Sary avy amin'i Abdul Aleem Khan
Fihetsiketsehana tao an-tanànan'i Sylhet. Sary avy amin'i Jamil Cowdhury.
Hetsika fandrehetana labozia. Sary avy amin'i Sharat Chowdhury
Indreto fihetseham-po sasany tao amin'ny Twitter:
#Shahbag Tonga namonjy ny hetsika ireo vahoaka avy amin'ny saranga rehetra. Mpanankarena-Mahantra-Ankizy-Tanora-Mpitolona fahiny-Mpanao fanatanjahatena. #Bangladesh izany.
— Prithvi Shams (@Prithvi_Shams) 8 Febroary 2013
Taorian'ny taompolo 4 mahery nanjakan'ny mpanolana sy ny mpamono olona nokaramain'ny minisiteran'ny governemanta, hoy izahay hoe ampy izay. #shahbag #Bangladesh #71
— Tahmima Anam (@tahmima) 8 Febroary 2013
— Tahmima Anam (@tahmima)
Afa-manaraka ny hetsi-bahoaka ianao amin'ny fampiasana tenifahatra #Shahbagh এবং #Shahbag.
56 minitra izayIndia